ụbọchị ọmụmụ: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 18 March 2019	• 35 Comments
N'ụtụtụ a, a ga-enwe ndị na-eyi ọha egwu na Utrecht. Anyị amaghị ihe ọ bụla, ma ọ bụghị na anyị na-agụ, nụ ma hụ akụkọ mkpesa na mgbasa ozi. A gaara agbapụ na tram na 24 Oktoberplein. Enweela mwakpo na Trumanlaan na Utrecht. E nwere dị ka [...]
Gịnị mere ndị a sị na ndị uweojii na-ahụ maka 'uwe ojii' Jawed S. adịghị achọchi anya?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 September 2018	• 7 Comments
Na Jawed S. akụkọ ga-abụrịrị na ọ ga-agbada ruo oge ikpeazụ. Onye ọkachamara nke na-ele ihe oyiyi mbụ sitere na "odeakụkọ" na-enweghị isi, na-ekpe ikpe n'enweghị obi abụọ na ihe oyiyi ahụ bụ ihe ngebichi. N'elu mgbasa ozi nke ikuku na ntanetị n'abalị ahụ, onyeisi ndị uweojii Amsterdam, Pieter-Jaap Aalbersberg, gwara ndị a na-akpọ 'spotters', pụrụ iche [...]
Ihe nkwụsị na Amsterdam Central Station site na 19 Afghan oge ochie na abụọ America
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 2 September 2018	• 10 Comments
Onye ọ bụla nke na-agbaso mgbasa ozi ruo oge ụfọdụ mara na ha na-akwụwa aka ọtọ. Nile Netherlands bụ n'ezie eziokwu. Ọ na-ama jijiji na ndị na-akwụwa aka ọtọ na Netherlands. Ụzọ kachasị mma isi mee ka ọha mmadụ dị elu bụ ka anyị bụrụ ndị zuru oke ma na-ekwupụtakwa eziokwu banyere ihe niile. Ị adịghị akwa ndị ọrụ ibe gị [...]
Nleta nile: 14.369.702
guppy op Mara akụkọ ihe mere eme iji ghọta usoro UN XX XX
Dick Klein Oonk op Mara akụkọ ihe mere eme iji ghọta usoro UN XX XX
Ntinye op Mara akụkọ ihe mere eme iji ghọta usoro UN XX XX
Martin Vrijland op Teknụzụ Smart na ọchịchị ụwa zuru ụwa ọnụ ga-echekwa ihu igwe